Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Xilisoft Video Converter Ultimate v7.8.21 Build 20170920 + KeyGen ♫
♪ Xilisoft Video Converter Ultimate v7.8.21 Build 20170920 + KeyGen ♫
Converter တွေအများကြီး ရှိတဲ့အထဲမှာ Xilisoft ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ တော်တော်လေး လူကြိုက်များပါ တယ်။ အခုလည်းနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Version လေးဖြစ်တဲ့ Xilisoft Video Converter Ultimate v7.8.21 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခု Version အသစ်မှာ ပါဝင်လာတဲ့ Feature ကတော့ 3D Video အထိပါ Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေကတော့များပြားပါတယ်။ မိမိကြိုက် တဲ့ Video Format ကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Xilisoft ကတော့ Video File Type တော်တော်များများကို Support လုပ်ပါတယ်ဗျာ။ Converter ဆိုတော့အသုံးပြုပုံကအားလုံးအတူတူ ပါပဲ ဒါကြောင့်မရှင်းပြတော့ပါဘူးနော်။ ဒါအပြင် Photo တွေကနေ Video ၊ Video ကနေ Photo စသည်ဖြင့် Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင် ချက်တွေအများကြီးပါ။ အမြဲတမ်း သုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Keygen File လေးပါတစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ အသေး စိတ်ကိုတော့ အောက်မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Xilisoft Video Converter Ultimate 7.8.21 Build 20170920 + keyGen: is easy, fast and reliable software with professional settings and optimized profiles for converting standard videos of all popular formats. It also supports the conversion from standard videos to 3D videos as well as the mode conversion among 3D videos.
Xilisoft Video Converter Ultimate 7.8.21 Build 20170920 supports video shots by iPhone and other smart phones as well as DVs. Now you can convert video, audio, and animated images to play on your iPod, iPhone, PSP, PS3, Xbox, mobile phone, MP4 players, Google phones, Apple iPad, iPad2 and other digital multimedia devices. Also it can convert HD and SD video formats, edit videos, clip, merge, split files, add watermarks, subtitles and soundtracks to videos. Xilisoft Video Converter allows even to convert between the different audio formats: MP3, WMA, WAV, AAC and so on…..
2). Thats all, Done & enjoy! Xilisoft Video Converter Ultimate 7.8.21 Build 20170920 + KeyGen.
အမျိုးအစား: Computer Software , Converter
▼ October ( 128 )
♪ Video File တွေကိုပြောင်းချင်တဲ့ Format အဖြစ်ပြော...
♪ သီချင်နားထောင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး - jetAudio M...
♪ SUPERAntiSpyware Professional 6.0.1250 + Key ♫
♪ Computer ပေါ်မှာ Data တွေကိုကူးယူတာပိုမိုမြန်ဆန်ေ...
♪ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ပြောင်ပုံလေးတွေ Video လေးတွေ...
♪ ဖုန်းထဲမှာတင် DJ Mix ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် - ed...
ဓါတ်ပုံကနေ ခဲခြစ်ပန်းချီ ပြုလုပ်နိုင်သော - Pencil ...
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် - Facebook APK 146.0....